TOETRANDRO : Mandray anjara amin’ny fampihenana azy ny fikajiana ny tontolo iainana
Miakatra 2°C isan-taona ny hafanana eto Madagasikara. Mihalava ny maintany any atsimo. 11 juin 2019
Mitombo ny rotsak’orana any amin’ny faritra avaratry ny nosy. Mihamatetika ary manimba kokoa ny tondra-drano sy ny rivodoza… Anisan’ny ahafahana mampihena izany ny fiarovana ny tontolo iainana, ary koa ny fitantanana mahomby ireo valan-javaboary sy faritra arovana. Sady mampihena ny voka-dratsin’ny loza voajanahary no mandray anjara amin’ny fampandrosoana izany. Misy ny tetikasa Résilience Climatique par la Préservation de la Biodiversité izay vatsian’ny BAD na ny banque africaine de développement vola ; ka ny UICN na Union internationale pour la conservation de la nature no mampihatra azy miaraka amin’i Madagascar National Parks.
Izany moa dia heverina fa hiarovana maharitra ny valan-javaboary miisa 14 eto Madagasikara sy hisandana azy. Ny olana anefa dia maro ny minia manapotika ireny valan-javaboary ireny eto Madagasikara na olon-tsotra na tetikasa na orinasa. Raha tsy hilaza afa-tsy ny alan’i Vohibola, ny ben’ny tanàna sy olona ambony no miray tsikombakomba amin’ny famotehana. Ny alan’Ankarafantsika izay potehin’ny Malagasy mpifindra monina. Ny alan’ny mikea tandindomin-doza noho ny fitrandrahana fasimainty ataon’ny sinoa, ny alan-javaboary ao Ranomafana potiky ny fitrandrahana vato sy volamena. Ny mahagaga matetika dia mifanindry amin’ny harena ankibon’ny tany ireny valan-javaboary ireny, ka tsy misalasala ireo mpitady vola miditra amin’izy ireny manao ny fitrandrahana.
Tao Ilakaka moa dia misy firaisana tsikombakomba amin’ny mpitandro filaminana. Noho izany dia mila tonga saina ny vahoaka iray manontolo ka handray anjara amin’ny fiarovana ny tontolo iainana. Hatreto mantsy dia navelan’izy ireo ho an’ireo tetikasan’ ny mpitondra fanjakana izay mahazo tombony mivantana amin’ny famatsiam-bola izany fiarovana izany. Vola amina an-jatony tapitrisa dolara no lany amin’ireo fandaharan’asa iarovana ny tontolo iainana maro nifandimby saingy tsy nisy nipaka any amin’ny Vahoaka ifotony izy ireo fa lany amin’ny fividianana fitaovana sy kivorivory ary fitsangatsanganana sy fanakaramana teknisianina vahiny. Tsy mahagaga raha tsy misy vokany mihitsy ary fanoherana aza matetika no misy satria manakana ny mba efa fiharian’ny mponina hatrizay. Efa miova ny fomba fitondrana ankapobeny izao, irariana hiova toy izany koa ny fitantanana ireo famatsiam-bola isan-karazany ireo ka mba hisy akony tokoa ary hampiova zavatra fa tsy hampanan-karena olom-bitsy fotsiny.